เพราะไบร์ท - วิน มายิงกัน! | Bright - Win Inbox EP.1 [Eng Sub] - MY - Stindx.com
Number of symbols: 15393
ဆရာဝန် ဆရာဝန် လိုနေပြီ! ဆရာဝန် ခေါ်ပေးကြပါဦး! (BRIGHT က လိုက်လည်း မပြောဘူး) မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ဒီနေ့တော့ တည်ငြိမ်နေပါလား (တည်ငြိမ်သူ မယ်တဝင်း) နည်းနည်း စိတ်လှုပ်ရှားပြပါဦး ဒီနေ့က Bright Win Inbox ရဲ့ ပထမဆုံးအပိုင်းလေ တကယ်ကြီးလား အစ်ကို? ခုမှပဲ မင်းနဲ့တူသွားတော့တယ် ကျွန်တော့်ကို မလိုက်နိုင်ပါဘူး ကြည့်ရှုသူတွေက Bright Win Inbox ဆိုတာ ဘာလဲ သိချင်နေကြပြီ ငါတို့ show က ဘာအကြောင်းလဲ Win? ဘာအကြောင်းလဲ? လုပ်ပြန်ပြီ သိပါတယ် Bright Win Inbox ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ inbox ကို လူတွေ စာပို့ကြလို့ ရတဲ့ show ပါ ဘာတွေ လုပ်စေချင်ကြလဲဆိုတဲ့ အကြံပြုချက်တွေနဲ့ ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကို ဘာလုပ်စေချင်ကြတယ်ဆိုတာကို GMMTV's Inbox ဆီ စာပို့လိုက်ရုံပါပဲ ပြီးရင် ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့က ကြည့်ပြီး အပိုင်းတစ်ပိုင်းစီအတွက် တစ်ခုစီ ရွေးချယ်သွားမှာပါ ပြီးတော့ ဒီပထမဆုံး အပိုင်းအတွက် ကျွန်တော်တို့ game အချို့ကို ကစားကြမှာပါ Chai Ja. (ဟုတ်ပါတယ်ဗျ) (နူးညံ့တဲ့ WIN) ပုံမှန်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က အားတဲ့အချိန်တွေ game တူတူကစားကြပါတယ် ကုန်တိုက်တွေမှာ ဆော့တဲ့ Arcade game တွေလိုမျိုးပေါ့ မင်း တစ်ခါတလေကျရင် ကိုယ့် condo မှာလည်း video game တွေ လာကစားတယ်လေ ဟုတ်ကဲ့ series ရိုက်နေတုန်းကလည်း နားတဲ့အချိန်မှာ အချိန်အားရင် ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်တော်တို့ စုပြီး game တွေ တူတူကစားကြပါတယ် ဟုတ်တယ် အဲ့မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ game တွေ ကစားကြတယ် ပြီးတော့ ဒီပထမဆုံး အပိုင်းအတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ games တွေက ရိုးရှင်းနေလို့ မဖြစ်ဘူး စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိနေရမယ် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြား စိန်ခေါ်မှု ပုံစံမျိုးပေါ့ ကျွန်တော်တို့ လေထီးခုန်တာတွေ ဘာတွေ လုပ်ကြမှာလား
အဲ့ဒါက စိန်ခေါ်မှု များလွန်းသွားပြီ ပြီးတော့ studio ထဲမှာ ရိုက်နေတာလေ ဒီထဲမှာတော့ အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူး ဒါဆို ပထမဆုံးအပိုင်းအတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တိကျမှု စွမ်းရည်ကို စစ်ဆေးကြမှာပါ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပြိုင်ကစားကြပြီဆိုရင် ဘယ်သူနိုင်တာများလဲ ဟိုးဟိုး သိပ်ပြီးတော့ မကြွားချင်ပါဘူး ကျွန်တော်သူ့ကို တစ်ခါမှ မနိုင်ဖူးသလောက်ပဲ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်သူ့ကို ပေးမနိုင်တော့ဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် သေချာပေါက် အစ်ကို့ကို အနိုင်ရအောင်လုပ်မှာ ကြိုးစားကြည့် ကြိုးစားကြည့် အစ်ကို့ကို နိုင်ဖို့လား? ကြံစည်မနေနဲ့ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ show, Bright Win Inbox အတွက် ကျွန်တော်တို့ န‌ှစ်ယောက်တည်းဆိုရင် တအား အထီးကျန်စရာကောင်းလိမ့်မယ် ထင်တယ် နှစ်ယောက်တည်းဆိုရင် ရန်ဖြစ်နေရလိမ့်မယ် ဘယ်သူမှန်တယ် မှားတယ် ပြောပေးဖို့ ကြားလူတစ်ယောက်တော့ လိုမှာ ကျွန်တော်တို့ ရန်မဖြစ်ခင် တားပေးမယ့် ‌ဖြန်‌ေြဖသူတစ်ယောက် လိုပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပထမဆုံး အပိုင်းအတံက် ပထမဆုံးဧည့်သည်က ‌ကြုံရာလူတော့ ဖြစ်လို့မရဘူး သူက ထူးချွန်တဲ့ စွမ်းရည်ရှိတယ် ကျွန်တော် သဘောကျရတဲ့ သူ‌တစ်ယောက်ဖြစ်တယ် လူကောင်းတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တယ် ဒါကတော့ သူ့ကိုယ်သူပြောထားတာပါ First, Kanaphan ကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ♪ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မရောက်လာစေချင်ဘူး ♪ ♪ ကိုယ်တို့ တစ်ယောက်ဘေးမှာ တစ်ယောက် အမြဲရှိမယ် ♪ ♪ မင်းဘယ်မှာပဲရောက်ရောက် ကိုယ်က မင်းဘေးမှာ ရှိနေမယ် ♪ မင်း စာသားပြောင်းဆိုချင်ရင် producer ကို အရင်မေးသင့်တယ်
တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျ ဟုတ်ပြီ ဟုတ်ပြီ မင်္ဂလာပါ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Bright Win Inbox မှ ကြိုဆိုပါတယ် ငါတို့ show မှာ မင်းက ပထမဆုံး ဧည့်သည်ပဲ ဂုဏ်ယူမိပါတယ် ကျွန်တော် အခု Win နဲ့ မပြိုင်ချင်တော့ဘူး သူတို့နှစ်ယောက်ကို အချင်းချင်းပြိုင်ခိုင်းပြီး ကျွန်တော် ဒိုင်လုပ်ချင်တယ် ဘာလို့လဲ? ကျွန်တော့်ရဲ့ နံပါတ် ၁ ညီလေး ဖြစ်ဖို့ ယှဉ်ပြိုင်ပွဲ ကျွန်တော် မကြွားချင်ပါဘူး ကျွန်တော်သာ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ပါရင် နှစ်ယောက်လုံး အဝေးကြီးရောက်သွားမှာ ဘာလို့လဲ? မင်းက အကောင်းဆုံးမို့လို့လား? အညံ့ဆုံးမို့လို့ပါ ဒီနေ့ရဲ့ game တွေအတွက် သေတ္တာ ၃ ပုံး ရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို့ သေတ္တာ ၁၊ ၂၊ ၃ အားလုံးကို ကစားကြမှာပါ ပြီးတော့ အနိုင်ရတဲ့သူ ဘယ်သူလဲဆိုတာကို သေတ္တာ ၃ ပုံးလုံးထဲမှာ အများဆုံး ဘယ်သူနိုင်လဲ ဆိုတာပေါ် မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ပထမဆုံး game ကို ခု သွားကြည့်ကြတော့မလား? သွားကြရအောင် ပထမဆုံး game က ဘာလဲဆိုတာ ကြည့်ကြမယ် ဟုတ်ပြီ First. ငါတော့ မသိတော့ဘူး ဒီ0နဲ့9နံပါတ်တွေက ဘာတွေလဲ? တိကျမှုနဲ့ ဒါတွေနဲ့ ဘယ်လို ဆက်စပ်နေတာလဲ? ဒီ game ကို "အမှတ်ရရင်ရ မရရင်သုည" လို့‌ ခေါ်တယ် ပထမဆုံး ဘယ်လိုကစားရမလဲဆိုတာ ကျွန်တော် အရင်ပြမယ် မဟုတ်ဘူး ဒီလိုလုပ်ကြရအောင် Win နဲ့ ငါနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပြိုင်ကြမယ် ဆိုပေမယ့် မင်းပါ ဝင်ကစားလိုက် ဒိုင်လူကြီး အမှတ်ပေါင်း ဘယ်လောက် ရမလဲဆိုတာ သိချင်နေပြီ ဒီနှစ်ယောက်ထက်တောဘ အမှတ်မနည်းဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် အာမခံတယ် deja vu ကျနေတာပဲ အဲ့ဒီစကားကို ခဏခဏ ကြားနေရသလိုပဲ စည်းကမ်းချက်တွေက : ကစားသမားတစ်ယောက်စီက မြှား ၁၀ ချောင်း ပစ်ရမယ်
အမှတ်အများဆုံး ရရှိထားတဲ့ ကစားသမားက အနိုင်ရရှိမယ် ဟုတ်ပြီ စကြရအောင် First ကနေ စမယ် ကဲ စပြီ9ကို ချိန်လိုက်ပြီ တကယ်လို့ လွဲပြီး လိုင်းပေါ်ကျသွားရင် သုညလို့ ယူမယ် ဘယ်ကို ထိသွားလဲ? သုည! တကယ်တော့ ဒီလို game မျိုးဆိုတာ ဟုတ်ကဲ့? တိကျတဲ့ စွမ်းရည်‌ေတွ မလိုဘူး game ရဲ့ နာမည်အတိုင်းပဲ "အမှတ်ရရင်ရ မရရင်သုည" အများကြီး စဉ်းစားစရာ မလိုဘူး ကြည့်9ရသွားပြီ ဒါပဲလေ (BRIGHT အားရပါးရကို ကြွားနေပြီ) အဲ့လိုမျိုး က‌စားရတာ ကြည့်စမ်း! ဘယ်လိုတောင် နှစ်ယောက်လံုး9လဲ! ဒီတိုင်းသာ ပစ်လိုက် ချိန်နေလို့မရဘူး ငါပြောတာ ယုံလိုက် "- ဒါက ၆ ခုမြောက် မြှားပဲ - ဟုတ်ပြီ" တကယ်ပဲ အစ်ကို ငါတို့ နှစ်ယောက်လုံးကတော့ (ဒီညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်က သူမသာကိုယ်မသာ ဖြစ်နေပြီ) Bro! Bro! ခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က 9, 27 နဲ့9စီ ရနေပြီ (WIN က ဦးဆောင်နေပြီ) ငါတို့ မမိုက်ဘူးလား? သုညချည်းပဲ ဆက်တိုက်ရနေတယ် ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်တို့လို ဘယ်သူရနိုင်လဲ? (WIN လည်း လွဲသွားပြီ) Okay Win က 27 မှတ်တောင် ရှိသေးတယ် ကျွန်တော်တို့ ဒီ game ကို နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး ရှိပါသေးတယ် First ရဲ့ ‌၆ ချောင်းမြောက် မြှား ဂုဏ်ယူနေတဲ့ FIRST! ကျွန်တော်က 18 မှတ် Win က 36 မှတ် ပြီးတော့ ကျွန်တော်က 18 မှတ် အဲ့တော့ ဒီတစ်ခေါက်အတွက်9မရရင် ရှုံးပြီပေါ့ ကျွန်တော့်ကို လုံးဝအနီးကပ်ရိုက်ပေးပြီး တအားရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် လုပ်ပေးလို့ရမလား Action! (BRIGHT က တအားကို စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားပုံပဲ)
(ခု WIN အလှည့်) (သက်သက်ညှာညှာလေး လုပ်ပေးပါ) ဂိုက်ပေးကြမ်းလိုက်တိုင်း သုညရနေတယ် ကျွန်တော် တစ်ခုလောက်ပြောလို့ရမလား? ကျွန်တော် ဟာသလုပ်နေတာတွေ တော်ပြီ ကျွန်တော်လည်း ရုပ်ချောချောကောင်လေးဆိုတာကို မှတ်မိနေစေချင်တယ် "Action" လို့ ပြောပေးပါဦး "Action" လို့ ပြောပေး Cut! Action! ခု ပြောတော့ Action! (ယှဉ်ပြိုင်လိုစိတ်‌ေတွ မြင့်တက်လာပြီ) (မင်းလုပ်နိုင်တယ် FIRST) (၃ ယောက်လုံးရဲ့ ကံက တူနေသောအခါ) ဘယ်လောက်ရလဲ First? သုည ဒီ game အတွက် အနိုင်ရတဲ့သူကတော့ Win ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒါက ပထမဆုံး game သေတ္တာပဲ ရှိသေးတယ် ထပ်ပြောပါဦး? Box. Okay. (စတဲ့နေရာမှာတော့ ဆရာတစ်ဆူပဲ) ကျွန်တော်တို့ game နှစ်ခု ကျန်ပါသေးတယ် Win က ပထမဆုံး game ကို နိုင်သွားပါတယ် နောက်ထပ် သေတ္တာမှာ ဘယ် game က ကျွန်တော်တို့ကို စောင့်မျှော်နေမှာလဲဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင် ဒါက ဒုတိယ game ပါ ဒါကို Win နိုင်ရင် ငါက ပြိုင်ပွဲကနေ ထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောလား အဲ့ဒါကို ကြိုမပြောပါနဲ့ဦး ဘာမဆို ဖြစ်နိုင်တယ်လေ Okay. ဒုတိယမြောက် game အကြောင်းပြောပါရစေ ဒီ game ရဲ့ နာမည်ကတော့ ဘာတဲ့လဲ? လဲကျသွားတဲ့ထိ ပစ်မယ် ဒီနာမည်က ရင်းနီးနေသလို မဖြစ်နေဘူးလား? ငါ့ကို အဲ့လိုကြည့်နေလိုက် မင်းကို လဲကျသွားတဲ့ထိ နမ်းပစ်မယ် ဒီ game အတွက် စည်းမျဉ်းတွေကတော့ လေသေနတ်ကို ဒီကနေပြီး ပစ်ကြရမယ်
ပြီးတော့ အဲ့မှာရှိတဲ့ ပစ်မှတ်တွေထဲက တစ်ခုကို ချိန်ရမယ် 1 target = 1 point ကစားသမား တစ်ယောက်စီက ၁၀ ကြိမ် ပစ်ခွင့်ရှိတယ် အမှတ်အများဆုံး ရရှိတဲ့ ကစားသမားက ဒီ game ကို အနိုင်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒါကို ဘယ်လိုပစ်ရလဲ ပြပါဦး ရတာပေါ့ ဘယ်တစ်ခုကို ပစ်ပေးရမလဲ? ဒုတိယ အတန်းက ပထမဆုံး တစ်ခု ဒုတိယအတန်းက ပထမဆုံးဟာလား? လွယ်လွယ်လေး ပစ်ချလိုက် ဒူးတွေ ကွေးထားဖို့လိုတာလား? အဲ့လိုအထာ ရှိတာလား? (FIRST ရဲ့ သေနတ်ပစ်ပုံ နည်းလမ်း) rifle ပြန်ကန်တာကို ခံနိုင်ဖို့လေ ဒီက လေပဲထွက်တာကို (FIRST ရဲ့ သေနတ်ပစ်စွမ်းရည်က အံ့မခန်းပဲ) (ဂုဏ်ယူလွန်) ကျောကို မတ်နေတာ ကြည့်ပါဦး ဂုဏ်ဆာနေတာ ပြောသားပဲ ကျွန်တော်က ဒီဟာကျွမ်းပါတယ်ဆို အဲ့ဒါကြောင့် အစ်ကိုတို့အတွက် သရုပ်ပဲပြပေးတာ မဟုတ်ရင် နိုင်ကြမှာတောင် မဟုတ်ဘူး ဘယ်သူအရင် စ,ချင်လဲ? ပစ်ဖို့ သေနတ်တောင် ကိုင်ပြီးနေပြီ Okay ခရာမှုတ်သံ ကြားတာနဲ့ သေနတ်ပစ်လိုက်ပါ ဘယ်တစ်ခုကို ချိန်ထားတာလဲ? ဒုတိယအတန်းရဲ့ လေးခုမြောက်ဟာ Bro! Yeah, we are the same. Win ရဲ့ ပထမဆုံး အချက် ဘယ်တစ်ခုကို ပစ်ချင်တာလဲ? အလယ်က တစ်ခု ၃ခုမြောက်လား ၂ခုမြောက်လား Okay. ဘက် မှားနေတယ်! အဲ့အကွက်သုံးမလို့တောင် စဉ်းစားနေတာ! (ဘယ်လိုခံစားရလဲ ပြောပါဦး BRIGHT) နားအူလိုက်တာ သူ့ pose ကို ကြည့်ပါဦး ဒါမှ အနေအထားအမှန် ခြေထောက်တွေနဲ့ ဒူးတွေနဲ့ကို ကွေးထားတာ ဒါဆို ဒါက အနေအထားအမှန်လား? မဟုတ်ဘူး ပစ်မှတ်ကို လွဲသွားပြီ သူ အနေအထားမှန်တယ်ပဲ ထားပါတော့ ဒါပေမယ့် ပစ်မှတ်တော့ လွဲသွားပြီ
Okay ကျွန်တော်က 1-0 နဲ့ နိုင်နေပြီ ဒီ ဒုတိယအကြိမ်အတွက် ဘယ်တစ်ခုကို ချိန်ထားလဲ? Win လွဲသွားတဲ့ တစ်ခု အလယ်က ၃ ခုမြောက် ဘယ်လိုပစ်ရလဲဆိုတာ ဒီကလေးကို ပြရမယ် လုပ်ပြချင်တာပေါ့ သူ့ကိုကြည့်ပေးလိုက် ကလေး မင်းက သူ့ရဲ့ ကလေးတဲ့ သူ့ပြောစကား နားထောင်ရမယ် (မင်းက BRIGHT ရဲ့ ကလေး, ဘယ်လိုပစ်ရလဲ ကြည့်ထားနော်) (WIN က လုံးဝကို မှင်သက်နေပြီ) နီးနီးလေးကို (WIN ကြည့်ရတာ အားရကျေနပ်နေတယ်) မင်းအတွက် ဒါထည့်ပေးမယ် (Win အတ‌ွက် ကျည်ဆန်တောင်ထည့်ပေးတယ်) / ကျေးဇူးပါ ကန်ထွက်သွားတယ်! Okay. P'Bright's အလှည့်. ဒါက သူ့ရဲ့ ငါးကြိမ်မြောက်ပစ်ချက် ဘယ်ပစ်မှတ်ကို ချိန်မှာလဲ? အောင်ဆုံးတန်းက ဒုတိယမြောက်တစ်ခု ပစ်! (ခရာမှုတ်သံ အသံတု) ဆရာဝန်! ဆရာဝန် လိုနေပြီ! ဆရာဝန်ခေါ်ပေးကြပါ! (BRIGHT က လိုက်လည်း မပြောဘူး) ဒါက ၉ ချက် မြောက်ပဲ အမှတ်တွေက အခု 3-1 ဖြစ်သွားပြီ ဒါက နောက်ဆုံးအချက်ပဲ ဒါပေမယ့် Win က လိုက် မမီသေးဘူး ၁၀ ချက် မြောက်ကို သူ့ကိုပေးပစ်မယ် အရင်ပစ်လိုက် (WIN ရဲ့ နောက်ဆုံး ပစ်ချက်) တကယ်တော့ ဒီတစ်ခုကို ချိန်ခဲ့တာ ပြန်ကန်ထွက်ပြီး ဟိုတစ်ခုကို ထိသွားတယ် မပြော‌နဲ့လေ ဟုတ်ပြီ P'Bright ၁၀ ချက် မြောက်နဲ့ ဒီ game ကို ဘယ်လို အဆုံးသတ်မလဲ ကြည့်ရအောင် Win ကို နှစ်မှတ်နဲ့ အပြတ်အသတ်နိုင်မလား တစ်မှတ်နဲ့ နိုင်မလား? ကြည့်ကြမယ် 4-2 ဆို ကြည့်ကောင်းမှာ (BRIGHT က ဒီအချက်အတွက် ယုံကြည်မှုပြည့်နေပုံပဲ) (FIRST က ဘယ်သူ့ဘက်ကလဲ?) ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်တာပါပဲ
game ၂ ခု အပြီးမှာ တော်တော်လေး ခြေကုန်လက်ပန်း ကျနေပြီ ကျွန်တော်ရောပဲ ခဏနားကြရအောင် ဒီမှာ ကျွန်တော့်မှာ အားလုံးအတွက် အားအင်တွေ ပြန်ဖြည့်ပေးမယ့်သူတွေ ရှိတယ် Lactasoy Prompt တစ်ခုယူ၊ First တစ်ခုယူ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Lactasoy Prompt က အခု ပုလင်းပုံစံသစ်နဲ့ ရောက်လာပြီ၊ အရသာရှိတဲ့ ပဲနို့ကို တစ်ကျိုက်တည်း သောက်လိုက်ပါ ပဲပိစပ်ကနေပြီးတော့ protein ဓာတ်ကို ရရှိပါတယ် တတိယမြောက် game အတွက် ဒါသောက်ပြီး အားအင်တွေ ဖြည့်လိုက်ကြရအောင် သောက်ကြစို့ ဗိုက်ပြည့်သွားပြီ အား‌ေတွ ပြန်ပြည့်လာပြီ ဒီဟာက တကယ်ကို ‌ဗိုက်ပြည့်တာ အခု တတိယမြောက် game အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ ကျွန်တော်ရောပဲ အစ်ကို ဘယ်လိုနေလဲ? "- ကျွန်တော်လား? - ဟုတ်တယ်" ကျွန်တော်တော့ ခု တကယ်ကို တက်ကြွလန်းဆန်းသွားပြီ "- ပြီးတော့ ဒီပုလင်းရဲ့ ထုပ်ပိုးမှုက သောက်ရ ပိုလွယ်စေတယ် - ဟုတ်တယ်" တော်တော်ကို ပိုအဆင်ပြေတယ် သယ်သွားရတာလွယ်ကူတယ်၊ အဖုံးလေးဖွင့်ပြီး သောက်လိုက်ရုံပဲမို့ သောက်ရတာလည်း လွယ်ကူတယ် အကောင်းဆုံးကတော့ ဒီထုပ်ပိုးမှုက သယ်ဆောင်ရ လွယ်ကူရုံတင် မကဘူး 100% ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်တယ် ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်လည်အသုံးချနိုင်ပါတယ် တကယ်လား? ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါက 100% ပြန်လည်အသုံးချနိုင်တဲ့ ထုပ်ပိုးမှုပုံစံပါ ဒီတော့ ဒါကို သောက်သုံးရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးကျေးဇူးတွေတင် မကဘဲ ကမ္ဘာကြီးအတွက်ပါ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းရာ ရောက်ပါတယ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှု? ဟုတ်တယ်၊ ဒါက ဦးတည်ချက် တစ်ခုပဲလေ ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းဖို့က ဦးတည်ချက်တစ်ခုပဲ ခု ဗိုက်ပြည့်ပြီလို့ ပြောလို့ရတယ် အားတွေလည်း ပြည့်သွားပြီ နောက်ထပ် game ကို သွားကြမလား?
ဟုတ်တယ် သွားကြမယ် တကယ်ကို အားအင်တွေ ပြည့်နေတာပဲ မျက်နှာအကာလည်း တပ်လိုက်ဦး (WIN က နောက်ထပ် ဟာသတစ်ခုကို လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်) ငါလည်း ရယ်ရအောင်လုပ်နိုင်တယ် မင်းပဲ ဟာသလုပ်နိုင်တာ မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တတိယမြောက် game သေတ္တာကို ရောက်ပါပြီ Win နဲ့ P'Bright ရဲ့ အနိုင်အရှုံးကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် game လည်း ဖြစ်ပါတယ် ဒီ game ရဲ့ နာမည်ကတော့ "ထိမှာလား လဲမှာလား" ပြန်ပြောပါဦး? "ထိမှာလား လဲမှာလား" နောက်တစ်ခေါက်လောက် ထပ်ပြောပါဦး "ထိမှာလား လဲမှာလား" ဒီတစ်ခေါက်တော့ နာမည်အမှန်ပြောပါတော့ Ah၊ "ထိမှာလား လဲွမှာလား" လို့ ခေါ်ပါတယ် ဒါကတော့ ဒီ game ကို ဘယ်လိုကစားရမယ်ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းပါ ကျွန်တော်တို့မှာ လေသေနတ် တစ်ခုရှိပါတယ် တစ်ယောက်ကို ကျည်ဆန် ၅တောင့်စီ ရပါမယ် စက္ကူပစ်မှတ်ကို ချိန်ပြီး ပစ်ရမှာပါ ၅ ချက်ပစ်တာမှာ အမှတ်အများဆုံးသူက အနိုင်ရရှိပါမယ် Okay. ပထမဆုံးတစ်ချက်က P'Bright ပါ ထိမှာလား လွဲမှာလား ကြည့်ကြရအောင် (အဲ့မှာ ဘာလုပ်နေတာလဲ WIN?) တူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင် ပထမဆုံးအချက်အတွက် ၉ မှတ် ရသွားပြီ ဒါက တော်တော်များတယ် ကျေနပ်လောက်စရာ အမှတ်ပဲ ဟုတ်ပြီ၊ Win ရဲ့ ပထမဆုံး အချက် အမှတ် ဘယ်လောက်ရမှာလဲ? ကြည့်ကြရအောင် (လက်တွေတုန်နေတယ် WIN) ၉ မှတ်၊ သူ ၉ မှတ် ရသွားပြီ ငါတို့ အမှတ်တူနေပြီ Win က ပထမဆုံး အချက်ကို ၉ မှတ် ရရှိသွားပါတယ် နှစ်ယောက်လုံး 9-9 သရေကျနေပြီ အေးဆေးပေါ့
ဒါက P'Bright ရဲ့ ၄ ချက် မြောက် ပစ် (သူတို့ ဘာတွေကြံစည်နေကြတာလဲ?) #FirstWinTeamNuisances #FirstWinငရှုပ်အသင်း ဘယ်နှစ်မှတ်လဲ? ၁၀ မှတ် အသံက ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး အောအောကြီးဖြစ်သွားရတာလဲ? အတွင်းထဲက အသံလေ (SARAWAT'S MODE ON) (မရတော့ဘူး ဆာရာဝပ် မုတွေ အွန်သွားပြီ) ဪ ဇာတ်ကောင်ထဲ ရောက်သွားပြီလား? ငါက သတ်မယ့်သူဆိုတော့ လေးလေးနက်နက်ပုံမျိုး ဖြစ်နေမှရမယ် ၄ ကြိမ်မြောက် အပြီးမှာ P'Bright က ၃၇ မှတ် ရရှိနေပါပြီ ခုလာမှာက Win ရဲ့ ၄ ချက် မြောက်၊ ပစ် ၉ မှတ် Win က ၉ မှတ်ရတယ်ဆိုတော့ သူ့ရဲ့ စုစုပေါင်း အမှတ်က ၃၈ မှတ်၊ P'Bright ထက် Win က တစ်မှတ် ပိုသာနေပြီ ဒီတော့ နောက်ဆုံးတစ်‌ချက်က ဘယ်သူ အနိုင်ရမလဲဆိုတာ အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုလုပ်ရအောင်၊ မင်း နိုင်တယ်လို့ ပြောလို့ရအောင် မင်းပဲ အရင် ပစ်လိုက်တော့ မင်း ၁၀ မှတ်ရရင် နိုင်မယ် ဟေး မညစ်နဲ့နော် ငါက ဒိုင်၊ ဘက် မလိုက်တော့ဘူး ဟေး မညစ်နဲ့နော် (BRIGHT က WIN ကို ထပ်စ,နေတယ်) မျှမျှတတဆော့ကြရအောင်လေ ၉ မှတ်ပါ ခု သူတို့ သရေဖြစ်နေပြီ ဟုတ်တယ်မလား? မဟုတ်ဘူးလေ တကယ်လို့ P'Bright က ခုပစ်မယ့် အချက် ၁၀ မှတ်ရရင် သရေဖြစ်မယ် ဒါပေမယ့် ၁၀ မှတ် ရဖို့က ခက်တယ် Okay. ဒါက P'Bright ရဲ့ ၅ ချက် မြောက် ပြီးတော့ အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် အချက် သူ ၁၀ မှတ်ရရင် သရေဖြစ်သွားပြီ လာပြီ
ဘယ်လောက်လဲ? ၈ အနိုင်ရတဲ့သူက Win ဖြစ်ပါတယ်2- 1 နဲ့ နိုင်သွားပါပြီ (WIN က အနိုင်ရရှိသူ) ပြီးသွားပြီလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ ဘာလဲ? ဘာလို့လဲ? Win၊ ရှုံးတဲ့သူ ဘာလုပ်ရမလဲ ပြောလိုက်ပါဦး ဒီနေ့အတွက် ရှုံးတဲ့ သူကတော့... အချိန်မဆွဲတော့ပါဘူး ရှုံးတဲ့သူက show ရဲ့ အပိတ်ကို ပြောပေးရမယ်၊ ဟုတ်ပြီ ဒီနေ့အတွက် မဟုတ်သေးဘူး Okay ဘယ်လို ဒဏ်ပေးမှာလဲ? ပြစ်ဒဏ်က (ဘာတွေ တိုးတိုး တိုးတိုး ပြောနေကြတာလဲ?) ပြစ်ဒဏ်ကတော့ ဒီဟာပါ တူတူကြည့်ကြရအောင် ဒီနေ့ ရှုံးတဲ့သူအတွက် ပြစ်ဒဏ်တစ်ခု ရှိပါတယ် ပြန်လာခဲ့ပါ မသွားပါနဲ့ဦး ပြန်လာခဲ့ပါ ရှုံးတဲ့သူက ဝါဆာဘိ ကို ပါးစပ်ထ‌ဲမှာ ငုံထားရမယ် နိုင်တဲ့သူက ပါးစပ်ထဲ ဝါဆာဘိ ငုံထားရမယ့် ကြာချိန်ကို ဖော်ပြထားတဲ့ ကတ်တစ်ခု ရွေးပေးရမယ် (P'BRIGHT HAS LEFT THE CHAT) (P'BRIGHT chat gp ကနေ ထွက်သွားပြီ) ၁၀ စက္ကန့်လား ၃၀ စက္ကန့်လား P'Bright ရဲ့ ကံက Win ရဲ့ လက်ထဲမှာ Win က ဘယ်ကတ်ကို P'Bright အတွက် ရွေးပေးမှာလဲ? P'Bright Jaa, ခဏနေ ပြီးသွားမှာပါ ရှုံးတဲ့ ခံစားချက်က ဒီလိုပါလား ကျွန်တော်ဆို show မှာ တစ်ခုခုဆော့လို့ ရှုံးတိုင်း အဲ့ ခံစားချက်ကို အမြဲရနေတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒီနေ့ ကျွန်တော်... ဒီဘက် မှာ (လမ်းကြောင်းလွှဲဖို့ ဟာသတွေ လုပ်နေရ) ရွေးလိုက်ကြတော့မလား? တစ်ခုရွေးလိုက်တော့မယ်နော် Okay. အရင်ဆုံး ရောလိုက်ဦးမယ် ရပြီ၊ P'Bright ရဲ့ ကံက Win ရဲ့ လက်ထဲ ရောက်နေပြီ
ဘယ်တစ်ခုက ၁၀ စက္ကန့် ကတ်လဲ? အဲ့ဒါကို မြှင့်ပြီး ပြပေးပါ ဒီဟာဖြစ်မယ်ထင်တယ်၊ ဒါလိုချင်လား? ဒီဟာက မင်းကို ငါ့ညီလေးအဖြစ် ဘယ်လောက် သစ္စာရှိလဲဆိုတာ စမ်းသပ်မှာ ကျွန်တော့်ကို စမ်းသပ်လို့မရဘူး၊ အစ်ကို Win ကို စမ်းသပ်ရမှာ၊ Win က ရွေးရမယ့်သူလေ မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်မှ မမြင်ရတာ ပိုမြင့်တဲ့တစ်ခုကို ရွေးလိုက် ဒါရွေးမယ် ဟင်? ဒီဟာလား? (FIRST ဝေခွဲမရဖြစ်နေပြီ) သေချာလား? First က ကျွန်တော့်ကို ဒီဟာရွေးဖို့ အချက်ပြနေတာ မဟုတ်ဘူး Win၊ ဒါကို ရည်ရွယ်ပြီး ပြတာ ပြီးတော့ ဒီနေ့အတွက် ရှုံးတဲ့သူက ပါးစပ်ထဲမှာ ဝါဆာဘိကို ၃၀ စက္ကန့် ငုံထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် အိုး၊ အဲ့ဒါ ၃၀ စက္ကန့်လား? မှားသွားတာ တောင်းပန်ပါတယ် အစ်ကို (တောင်းပန်တာ တအားနောက်ကျသွားပြီ FIRST) ကတ်အမှားကို မတော်တဆမြှောက် မိသွားတာ ဘာလုပ်သင့်လဲ? တောင်းပန်ပါတယ် တကယ်ပါ သူက ငါတို့နဲ့ နှစ်တွေအကြာကြီး အတူရှိဦးမှာ နောက်တော့မှ ပြန်ပေးရအောင်လုပ်မယ် (မကြာခင် လက်စားပြန်ချေမယ်) သူတို့နှစ်ယောက်က အတူတူဆိုတော့...အဲ့တော့ ကျွန်တော့က တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်နေရပြန်ပြီ ထပ်ပြောပါရစေ၊ ကျွန်တော် စိတ်မဆိုးပါဘူး ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး အမှန်ပဲ ဒီစကားကို ၃/၄ ကြိမ်လောက် ကြားပြီးပြီ ဟုတ်ပြီ ကျွန်တော် ဒီမှာ ဝါဆာဘိ ရှိပါတယ် P'Bright ရဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကို မျှခံကြမလား? ငါတို့ ပါးစပ်ထဲမှာ ၁၅ စက္ကန့်လောက် ထည့်ထားပြီးတော့ ငါနဲ့တူတူလုပ်မလား? အစ်ကို့ရဲ့ စိတ်ထက်သန်မှုကို ပြလိုက်ပါဦး ငါကဒီမှာ ဒိုင်အနေနဲ့ လာတာ ပြေးပြီ (ဘယ်ကို သွားမလို့လဲ WIN?) ဟုတ်ပါပြီဗျ၊ ခုချိန်က P'Bright ပါးစပ်ထဲမှာ ဝါဆာဘိ ငုံထားရမှာပါ
ပြီးတော့ ၃၀ စက္ကန့်ကြာအောင် ထားထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် Okay. စလိုက်ရအောင် (BRIGHT ရဲ့ မျက်နှာက ထုံနေပြီ) #FirstWinTeamNuisances (#FirstWinငရှုပ်အသင်း) Okay၊ ဝါဆာဘိ ပြစ်‌ဒဏ်က ပြီးသွားပါပြီ ဟုတ်ကဲ့ အစပ်တွေ ပြေသွားဖို့ အကူအညီပေးမယ့်အရာလေး ရှိပါတယ် Lactasoy Prompt က အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ် Lactasoy Prompt က အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ် Lactasoy Prompt က အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ် Lactasoy Prompt က အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ် Lactasoy Prompt က အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ် အစပ်တွေကို ပျောက်သွားစေရုံတင် မကပါဘူး protein ဓာတ်ကို ရရှိစေပြီး အားအင်တွေကို ပြန်လည်‌ဖြည့်စွမ်းပေးပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်၊ အားအင်တွေကို ပြည့်ဝစေပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်၊ သောက်ကြရအောင် သောက်ကြမယ် Cheers ကြမယ်! Cheers! ဒီနေ့ အတော်လေး ပျော်ခဲ့ရပါတယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က ဒီနေ့ တကယ်ကို ပျော်တာ (တကယ်လား FIRST?) သိပါတယ် ဟုတ်ပါပြီ၊ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် First ဒီနေ့ကို ပထမဆုံးဧည့်သည်အဖြစ်နဲ့ ရောက်လာပေးလို့ Bright Win Inbox မှာ၊ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ် ပြီးတော့ ထုပ်ပို့မှု ပုံစံအသစ်နဲ့ Lactasoy Prompt ကိုလည်း‌ ကျေးဇူးတင်ရမယ် ခု ပုလင်းပုံစံနဲ့ လာတာပါ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ activity အသစ်တွေလည်း အားလုံးအတွက် ပါဝင်ဖို့ ရှိပါသေးတယ် ပါဝင်ကြပြီး Lactosy Prompt ကို ရယူကြပါ Lactasoy Facebook page မှာ အချက်အလက်တွေလည်း အဲ့ဒီမှာ ထပ်ပြီး ရှာကြည့်လို့ ရပါသေးတယ် ကျွန်တော်တို့ကို တခြားဘာလုပ်ဖို့ မြင်ချင်ကြပါသလဲ? အကြံဉာဏ်တွေကို GMMTV Facebook ရဲ့ inbox မှာ ပေးပို့ပေးထားကြပါ ကျွန်တော်တို့ကို ဘာတွေ လုပ်စေချင်ကြလဲ သိပါရစေ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်၊ အကြံပြုချက်တွေကိုသာ ပေးပို့ထားလိုက်ပါ နောက်ထပ်အပိုင်းကိုလည်း စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦး လတိုင်းရဲ့ နောက်ဆုံး အင်္ဂါနေ့ ည ၈ နာရီ အတိမှာပါ ဒီ show ကို ဘယ်မှာ တင်တာလဲ Win? GMMTV ရဲ့ YouTube မှာပါ LINE TV မှာလည်း တင်ထားပါတယ် Bright Win Inbox မှာ ပိုပျော်စရာကောင်းတာတွေကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦး Subscribe ကို နှိပ်ပေးပါ / Subtakrite (စပါးလင်လှီးတာ) ခုခေတ် ဆယ်ကျော်သက်တွေ အဲ့လိုခေါ်ကြတာလား? ဟုတ်တယ် ပြီးတော့ ခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုလည်း "on" ပေးပါ (get notifications လုပ်ခိုင်းတာပါ) ကျွန်တော်တို့ video အသစ်တွေ တက်လာတဲ့ အချိန်ကျရင် ဒါမှမဟုတ် တခြား GMMTV က အနုပညာရှင်တွေရဲ့ video ‌ေတွ တင်ရင် မသိလိုက်တာမျိုး မဖြစ်အောင်ပါ ဒီနေ့အတွက်တော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ နှုတ်ဆက်ပါရစေ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ နံပါတ် ဝမ်း ကို ပစ် ပစ်လိုက် ခရာသံ အသံတု လုပ်ပေးပါဦး အသံ တည်းဖြတ်သူကတော့ ‌ဒီလိုဖြစ်နေတော့မယ်